5 beddel oo ku saabsan terminalka Linux | Laga soo bilaabo Linux
5 beddel oo ku saabsan terminalka Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Isticmaal FileLet, Lagu taliyay
In kastoo ay u badan tahay inay raaxo u tahay isticmaaleyaal badan inay ogaadaan isticmaalka terminal waxay noqon kartaa badanaa, hadaanay ahayn gebi ahaanba, laga fogaado Thanks to horumarka hadda jira ee qaybinta Linux, wali waxaa jira a bulshada jecel ee "xoogga caayaan" ee Khadka taliska.
Tabsku waa faa'iido weyn, laakiin ka waran haddii aad rabto inaad aragto habab badan oo isku mar ah? Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad wax ka qabato qaar ka mid ah feylasha qaabeynta isla mar ahaantaana waa inaad daalacataa nidaamkeeda faylka ama aad eegtaa bogga gacanta.
Terminator, ahaanshaha emulator-ka kuu oggolaanaya inaad furto dhacdooyin badan qaab ah "taayl" ayaa si gaar ah waxtar u leh haddii aad haysato qaddar deeqsinimo leh oo shaashad ah isla markaana waqti aad u badan ku qaadanaya isticmaalka boosteejada. Waxaad awoodi doontaa inaad uqeybiso daaqada guud inta "tiles" aad ubaahantahay. Sidaa darteed, waxay u badan tahay inaadan furi doonin wax ka badan hal tusaale Terminator markiiba.
sudo apt-hel rakib terminator
Tilda waa qaab "Quake" emulator terminal ah oo la isku haleyn karo, taas oo macnaheedu yahay inay hoos uga soo dhacayso dusha sare ee desktopkaaga marka furaha isticmaale ee lakala garan karo la riixo (F1 asal ahaan).
Si fudud haddii loo dhigo, Tilda xooggeeda ayaa ah inay ka qarsoon tahay aragtida illaa loo baahdo, xilligaas oo ay si ku habboon u muuqato iyada oo aan la raadinaynin menus si loo bilaabo barnaamijka. Waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay howlaha degdegga ah sida rakibidda ama ka saarista barnaamijyada, tafatirka feylka, iwm.
Si kastaba ha noqotee, isku mid ayaa loo dhihi karaa mid ka mid ah emulators-qaabka Quake-ku halkan ku xusan. Waxa kala saara Tilda ayaa ah xulashooyinka isticmaalaha u oggolaanaya dabacsanaanta in ay qabato hawlo aad u adag.
sudo apt-hel rakib sax
Guake wuxuu la mid yahay shaqeynta Tilda, laakiin muuqaal ahaan wuu yaryahay waxyarna looma habeyn karo. Taasi waxay tiri, waxay kaloo leedahay astaamo aan Tilda sameynin (sida toobiye kumbuyuutar loogu talagalay beddelidda dusiyeyaasha, taas oo taageerayaal badan oo Yakuake ah loo isticmaali doono).
sudo apt-hel rakib gueeg
Sjterm waa emulator terminal terminal Quake-style aan si fiican loo aqoon, laga yaabee maxaa yeelay waa lagu kaydin karaa oo keliya khadka amarka ama feyl qoraal ah.
Taasi waxay tiri, stjermku wuxuu siiyaa fursado u dhigma Guake iyo Tilda. Sidoo kale waa mid aad u fudud, wuxuu awood u leeyahay inuu furo tabs badan, waxaana ku jira ikhtiyaar aad ugu beddesho shaashad buuxda.
sudo apt-hel dillaac
Kuwa isticmaala KDE ama aan dhib u qabin isticmaalka barnaamijyada KDE, Yakuake waa ikhtiyaar weyn.
In kasta oo uu ka soo jeedo KDE, haddana wuxuu si fiican ula midoobayaa GNOME oo wuxuu ku shidan yahay buug yar oo netbook ah. Marka laga hadlayo shaqeynta waxaa jira waxyaabo qaar ah in la nadiifiyo laakiin waxay dareemeysaa inay u bislaatay sida mid ka mid ah barnaamijyada liiskan ku qoran, in kasta oo ay faa'iido u leedahay in hadda si firfircoon loo horumariyo.
sudo apt-hel rakib yaqaake
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » 5 beddel oo ku saabsan terminalka Linux
Xiiso leh! Tabaruc wanaagsan!
waa hab lagu dhaho ... aan ku raacno in xaaladaha qaarkood ay caadi ahaan tahay wax aad u dhib badan in la isticmaalo terminaalka (tusaale ahaan in filim loo beddelo iyadoo la adeegsanayo ffmpeg, iwm).
Laakiin, ka taxaddar, in ay waxoogaa ka sii dhib badan tahay isticmaalka terminalka macnaheedu maahan inay ka yar tahay "mid xoog badan", lidkeeda.
[…] Weli waxaa dhexdeena ka jira beel jecel oo ah "xoog xoog" ee xariiqda taliska.
Uma arko sababta ay u tahay xoog caayaan, ugu danbeyntii dhamaan isdhaafsiga oo dhan waxay u adeegaan sidii dhamaadka-dhamaadka terminalka, marka kuwa naga mid ah ee isticmaala terminal-ka waxaan si fudud u baabi'ineynaa tallaabo laakiin aakhirkii si isku mid ah ayaan sameyneynaa .
Hagaag dib ugu noqoshada soo galida, aad ufiican, waxaan isticmaalayay Yakuake mudo dheer hada, ilaa Ubuntu oo leh gnome 2.3.x waxayna sifiican ugu shaqeysay gtk. Hadda distoor kale oo horeyba ula jiray KDE waa wax fiican. Waxay aniga ila tahay shaqsiyan kan ugufiican (liiska) maxaa yeelay dhamaan sifooyinka lagu xusay galitaanka waa yakuake. Qeybaha shaashadda, tabs, waa la rogrogmi karaa, laysku habeyn karaa, wuxuu leeyahay qaabab muuqaal ah, hufnaan REAL (habka, yakuake ee sawirka ma leh daahfurnaan dhab ah), iwm.
Waxaan sidoo kale Tilda u adeegsaday xoogaa Arch anigoo wata sanduuqa furan, uma muuqan wax aniga ila fiican, waa inay noqotaa maxaa yeelay horeyba waan u baran jiray yakuake.
Yakuake aad u fiican, maalin walba waan isticmaalaa 😀
Iyo Maamulaha PAC (http://sourceforge.net/projects/pacmanager/) Waa terminal weyn oo aad sidoo kale keydin karto isku xirnaanta aad sameyso adigoo ku abaabulaya fayl. Khasaaraha kaliya ee aan arko ayaa ah inaadan dejin karin dhammaan midabada ANSI qaab caado ah, laakiin inta soo hartay, waa tan ugu fiican ee la heli karo dhadhankeyga.
Ku jawaab si aad u lumiso
Julio Sanches dijo
Boosto aad u wanaagsan, runtii waan ka helay Terminator, runti waa raaxo markaad isticmaasho dhowr terminaal isla waqtigaas
Jawaab Julio Sanchez
Markii aan khibrad ka helay Linux waxaan xaqiiqsaday inaan termial-ka aad iyo aad u isticmaalayo. Shaki la'aanna codsiyadaani aad iyo aad ayey faa'iido u leeyihiin, gaar ahaan kuwa kuu oggolaanaya inaad qariso boosteejada.
Intii aan ku jiray Ubuntu waxaan isticmaali jiray Tilda, illaa aan ka helay Guake. Hadda oo leh Arch Linux, waxaan u isticmaalaa terminal-ka wax badan, Guake waa codsigeyga.
Taasi waa waxa GNU / Linux ay leedahay, oo lid ku ah waxa dad badani u malaynayaan, terminal-ka ayaa noloshaada fudud makes
Kernel 3.2 ayaa lagu heli karaa warar xiiso leh
Isbedelada xiisaha leh waxay ku imaanayaan Xfce 4.10, aan aragno qaar